८० घण्टा चार मिनेट भाषण गरेर विश्वकीर्तिमान बनाए अनन्तरामले | Suvadin !
भाषणको रेकर्ड गिनिज बुकमा पठाएर विश्वकीर्तिमानका लागि दावी गरिने
८० घण्टा चार मिनेट भाषण गरेर विश्वकीर्तिमान बनाए अनन्तरामले
नुवाकोटको चिसापानीका अनन्तराम केसीले लगातार ८० घण्टा ४ मिनेट भाषण गरी विश्व कीर्तिमान बनाएका छन्। राजधानीको मित्रपार्कस्थित टेक्सास इन्टरनेशनल कलेजमा केसीले असोज १९ गते विहान ६ बजेदेखि आइतबार दिउँसो ३ बजेर २ मिनेटसम्म भाषण गरेका हुन्। विश्व दर्शन अभियान नेपालका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार केसीको ८० घण्टा ४ मिनेटको भाषणको रेकर्ड गिनिज बुकमा पठाएर विश्वकीर्तिमानका लागि दावी गरिनेछ।
Oct 09, 2017 06:53
लगातार ८० घण्टा ४ मिनेट भाषण गरी विश्व कीर्तिमान बनाएका अनन्तराम केसी।
काठमाडौं, असोज २३–नुवाकोटको चिसापानीका अनन्तराम केसीले लगातार ८० घण्टा ४ मिनेट भाषण गरी विश्व कीर्तिमान बनाएका छन्।
राजधानीको मित्रपार्कस्थित टेक्सास इन्टरनेशनल कलेजमा केसीले असोज १९ गते विहान ६ बजेदेखि आइतबार दिउँसो ३ बजेर २ मिनेटसम्म भाषण गरेका हुन्। विश्व दर्शन अभियान नेपालका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार केसीको ८० घण्टा ४ मिनेटको भाषणको रेकर्ड गिनिज बुकमा पठाएर विश्वकीर्तिमानका लागि दावी गरिनेछ।
यसअघि भारतको गुजरातस्थित सुरतका अश्विन सुडानीले ७५ घण्टा ३२ मिनट भाषण गरेर गिनिज बुकमा नाम लेखाएका थिए। कीर्तिमानका लागि लायन्स क्लव अफ काठमाडौँ विहानीको आयोजना तथा लियो क्लवलगायतका संस्थाको सहयोगमा सो कलेजमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा केसीले ८४ घण्टा भाषण गर्ने योजना बनाएका थिए। तर, उनले आइतबार दिउँसोसम्म ८० घण्टा ४ मिनेट मात्र भाषण गर्न सफल भएका हुन्।
भाषणमा केसीले एक घण्टामा पाँच मिनट विश्राम गर्दै विभिन्न ७७ विषयमा भाषण गरेका थिए। त्यसमा लायन्सको सेवा, जीवन दर्शन, साधना, मेमोरीलगायत विषय रहेका थिए। उनले विभिन्न विषयमा प्रवचन पनि दिए। केसीले दिनरात उभिएर र समय समयमा कुर्सीमा बसेर समेत भाषण गरे।
को हुन् अनन्तराम?
२०५८ सालमा स्वामी विकासानन्दको मनोक्रान्तिमा जोडिएका अन्नतराम त्यसको दुईवर्षपछि सामुदायिक माध्यमिक बिद्यालयको हेडमास्टरको जागिर छाडेर अध्यात्म साधना मार्फत अनन्तको खोजिमा भारततिर लागे। उनी एक यात्री हुन्। यात्रा केसीको रुची हो।
केसीले नेपालको ७५ जिल्लाको फन्को मार्दा ८५०० किमि दूरी छिचोलिसकेका छन् भने ०६६ सालमा भारतको ६ वटा प्रान्तको ४ हजार किलोमिटर बाटो पनि नापीसकेका छन्। केसीले काठमाडौंदेखि भारतको कन्याकुमारीसम्मको १२ हजार ५०० किमिको दूरी पैदल यात्रा गरेका छन्। उनी आध्यात्मिक, योग, जीवनदर्शन, स्वास्थ्य जस्ताको साधक भएको त्यसै बिषयलाई मूल आधार बनाएर बोल्छन्।
गिनिज वल्र्ड रेर्कडमा नाम लेखाउने केसीको पहिलादेखिकै लक्ष्य थियो। उनी भन्छन्, ‘केही न केही पुरुषार्थ गर्नुपर्छ अर्थात् केही न केही कृति त राख्नु पर्छ भन्ने मेरो पहिला देखि कै सोच हो। अग्रज, गुरु ज्ञानीहरुको संगतले मलाई यो काम गर्छु भन्ने विश्वास भयो। मेरा शुभचिन्तकले पनि हौसला दिनुभयो । संसारमा हरेक कुरा सम्भव छ। मभित्र पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच पलायो। यसैले गर्दा लामो भाषणको रेकर्ड गिनिज बुकमा लेखाउन लागेको हुँ।’
केसी स्वर्गीय मदन भण्डारीदेखि युवा नेता गगन थापा र बिकासानन्दको फ्यान रहेको बताउछन्। गिनिज बुकमा नाम लेखाएर देशको लागि मैले केही गरें भनेर आत्मसन्तुष्टि हुने उनी बताउछन्।